umatshini wokuomisa i-pellet wokomisa ii-pellets zokondla iintlanzi,iinkukhu zityisa ipellets
1.Lo matshini wokomisa wepellet usetyenziswa ngokubanzi kumachiza, ukutya, iyeza, izixhobo zokwakha, ii-elektroniki kunye namanye amashishini, isebenza ngokukodwa kwizixhobo ezenziwe ngegranular kunye neepellets.
2.umatshini wokuomisa i-pellet uhlala usetyenziswa ngokudibeneyo nepellet yokutya Kwisityalo sokuvelisa ukutya.
3.Iipellets zokutya kweentlanzi zithuthwa zivela kwi-extruder yokutya kweentlanzi kumatshini wokucoca i-pellet, emva koko ihanjiswa kwibhanti ye-mesh eyenziwe ngentsimbi engenasici.
Iipellets zokugqibela ezivela intlanzi yokutya eyongezelelweyo okanye ifile yeglasi yokufa zinomswakama kubushushu obuphezulu, ukuze bangakwazi ukuhambisa kwaye bagcinwe kwangoko kwaye bafuna ukuba zome kuqala. Umatshini wokumisa i-pellet womatshini wokumisa womatshini wenziwe ngokukodwa umatshini ukususa umswakama we-pellet kunye nobushushu obuveliswa kwimveliso yepellet. Inkqubo yokumisa i-Pellet: ukubeka izinto kwibhanti lokuhambisa ngentshukumo ehamba kunye nokunxibelelana nomoya oshushu kumhubhe ukuze wome. Ukomiswa kwe-pellet engalinganiyo, Uqwalaselo oluguqukayo kunye nesixhobo esahlukileyo sokwahlula umoya, Umatshini womatshini wokumisa ibhanti unikezelwa ngeemodeli ezintathu zokwenza ukomelela kwakho!
umatshini wokuomisa i-pellet uhlala usetyenziswa ngokudibeneyo nepellet yokutya Kwisityalo sokuvelisa ukutya. Iipellets zokutya kweentlanzi zithuthwa zivela kwi-extruder yokutya kweentlanzi kumatshini wokucoca i-pellet, emva koko ihanjiswa kwibhanti ye-mesh eyenziwe ngentsimbi engenasici. Ebethetha ngebhanti ye-mesh, Inokwakheka komaleko emininzi kwaye iyashukuma, ezenza ukuba zomile ngokukhawuleza & ukusebenza okuphezulu, umatshini wokomisa ukwabizwa ngokuba yiMesh-ibhanti yohlobo lwePellet Dryer. Lo matshini wokomisa wepellet usetyenziswa ngokubanzi kumachiza, ukutya, iyeza, izixhobo zokwakha, ii-elektroniki kunye namanye amashishini, isebenza ngokukodwa kwizixhobo ezenziwe ngegranular kunye neepellets.
UkuSebenza kunye nokuLungiswa koMatshini wokuDryla iPellet
Ukondla pellet umatshini yokomisa intloko ubunjwe izileyi ezimbini eqhutywa, qinisa, yondla inlet kunye nendawo yokuphuma.
Ukuhamba kancinci kuthwala ubunzima kwaye kuqinisekisa ukuqina kwebhanti ye-mesh, Ke iibheringi kumacala omabini esiqengqeleki esidlulayo kufuneka zithanjiswe rhoqo ngamaqondo aphezulu obushushu (ngaphezulu kwe-200 ℃) ioyile yegrisi, Ukuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo kwesomisi seepellet.
I-Tightener kukulungelelanisa ukuqina kwebhanti ye-mesh. Ukufakwa kokuqala, ibhanti ye-mesh kufuneka iqiniswe, nasemva kokuphakama, qinisa kwakhona (ngenxa yokwanda kwamafutha).
Eli nqanaba yeyona ndawo usebenza yokomisa izinto, Umbhobho wokuqhuma kunye nombhobho wokukhupha ukufakwa kumphezulu. Umoya oshushu ungene ngaphakathi kwigumbi elingaphakathi kwigumbi elingaphakathi ukusuka kumacala omabini, emva koko ikhutshwe ngumbethe womoya ophakathi. Kukho iivalves zokulawula ezifakelwe ngaphakathi kwendawo yokungena nomoya kunye nendawo ephumayo kuyo ukuze kulungelelaniswe isantya somoya.
Inxalenye yokuhambisa ifakwe esiphelweni sokomisa ukutya kwe-pellet. Ubungqingqwa bexinano lokuhambisa bunokulungiswa ngokuhlengahlengisa indawo yokuncitshiswa kwegiya. Ukuhambisa igiya kwelinye icala lokunciphisa iigiya kuya kufaka ne-oyile yeoyile yokwandisa ubomi bayo benkonzo.
How wenza ukuba uPellet Dryer Machine Umsebenzi?
Lo matshini wokomisa i-pellet womatshini wenziwe ngamacandelo amaninzi azimeleyo. Iyunithi nganye inayo fan ejikelezayo, isixhobo sokufudumeza, Inkqubo eyahlukileyo okanye yenkqubo yokutsha yomoya entsha kunye neyokuphelisa inkqubo. Ipharamitha yokusebenza kwecandelo ngalinye lilawulwa ngokuzimeleyo, Ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo kunye nokwenziwa ngcono.
Isiphatho esasaza iipellets zokutya ngokulinganayo kuludwe oluphezulu lwebhanti, eyenziwe nge-wireless ye-wire mesh okanye iplate eyenziwe ngefreyimu. Iipellets zihamba kunye nebhanti elihambisa kwaye liwa ngokuthe ngcembe kumaleko ongezantsi. Umoya oshushu udlula kwiipellets kwaye uzisa umswakama. Ekugqibeleni i-pellets iyakhutshwa ngokukhupha.
Ulwazi lobuchwephesha boMatshini wokuDrytha iPellet
Umzekelo Ububanzi ibhanti enemingxuma
(mm) Amandla apheleleyo
I-VTKG500 500 10 300-400
I-VTKG800 800 25 600-800
I-VTKG1000 1000 55 1000-1500
Ukusebenza kwevidiyo yomatshini wokuomisa i-pellet